Suxufiga caanka ah ee Fabrizio Romano oo sheegay kooxda uu ku biirayo David Alaba haddii uu ka tago Bayern Munich – Gool FM
(Yurub) 04 Jan 2021. Saxafiga caanka ah ee Fabrizio Romano ayaa tilmaamay in daafaca kooxda Bayern Munich ee David Alaba uu doonayo isla markaana uu ku riyoonayo ka ciyaarista kooxda reer Spain ee Real Madrid.
Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay ku dhowdahay inay kula saxiixato daafaca reer Austria ee David Alaba beeca xurta ah inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, bilowga xilli ciyaareedka soo socda.
In ka badan hal koox oo qaarada Yurub ah ayaa isha ku haya mustaqbalka daafaca reer Austria iyo kooxda Bayern Munich ee David Alaba si ay ula saxiixdaan dhawaan.
Wargeyska “Sport” ee ka soo baxa Spain ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan dhibaatooyin soo wajahay maamulka Bayern Munich oo ku aadan habka loo cusbooneysiinayo qandaraaska daafaca reer Austria ee David Alaba.
David Alaba ayaa qandaraaska uu haatan kula jiro Bayern Munich wuxuu dhacayaa xagaaga sanadka soo socda ee 2021, taas oo ka dhigeysa in maamulka kooxda weyn ee Bavaria-ka ay qatar ugu jiraan inay si bilaash ah ku waayaan adeega Alaba xagaaga soo aadan.
Lionel Messi oo laga waayey Shaxda 11-ka xiddig ee ugu fiicnaa 2020 oo ay ku dhawaaqay L'Equipe & Ramos kaligiis oo ka socda horyaalka La Liga